I-Kendi 's Beach Cottage - Indlu ye-8 - I-Airbnb
I-Kendi 's Beach Cottage - Indlu ye-8
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguKendi
Indawo yam ikufutshane nolwandle, inkampu yokusefa, kunye nezinye iindawo ezintle ezikufutshane needolophu ezikufutshane - iGubat Heritage Museum, iTulay sa Tibo Mangrove Reserve, iAgoho Forest Reserve, iBulusan Lake, iHot & Cold Springs, iPaguriran Island, njl. Uza kuyithanda indawo yam ngenxa yabantu, ubuhle bayo, indawo ephandle nekhethekileyo ngenxa yokuphuma kwelanga kunye nokubona inyanga yonke ukusuka emgangathweni. Indawo yam izilungele iintsapho, izibini kunye nabantu abathanda izinto ezingaqhelekanga.
Indawo ineendawo zokulala ezi-2. Igumbi lokulala le-masters linebhedi enye yokumkanikazi kunye nebhedi eyodwa yokukhupha. Inendlu yayo yangasese kunye nebhafu.
Enye indawo yokulala yindawo ephezulu eneebhedi ezimbini ezinobukhulu obuphindwe kabini kunye nebhedi enye ephindwe kabini yesofa. Indlu yangasese kunye nebhafu kwabo bahlala kwiloft ihlala yobelwana kwaye ibekwe kumgangatho ophantsi. Zonke ii-T&B zixhotyiswe ngesifudumezi samanzi ukulungiselela iimfuno zakho zeshawa eshushu & ebandayo.
2 iibhedi ezilala abantu ababini, isofa ekwayibhedi eyi-1, Iimatrasi ezibekwa phantsi eziyi-2
Indawo yethu ikwidolophu endala enomtsalane yaseGubat, eSorsogon. Imalunga neekhilomitha ezingama-600 kumazantsi eManila. Inokufikelelwa emhlabeni okanye ngomoya.
Kukho imigca yebhasi emininzi eya kwidolophu yaseGubat isuka eManila efana nePhiltranco, Elavil, Cagsawa & DLTB. Ukuhamba ngebhasi okanye ukuqhuba imoto yakho kuthatha iiyure ezili-12.
Ngomoya uhamba ngendlela yaseManila-Legazpi nokuba yiPAL okanye iCebuPacific. Ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya, unokukhetha ukufumana inkonzo yokudluliselwa kwindwendwe yakho okanye uthathe iveni esuka eLegazpi ukuya eSorsogon. Ukusuka apho uthatha ijeepney ukuya eGubat.
Umbuki zindwendwe ngu- Kendi
Andizuhlala ndikhona kodwa ndiya kuqinisekisa ukuba zonke zithathelwe ingqalelo phambi kokuba ufike. Ngeemfuno zakho zokuhamba, iipakethi zokhenketho, iimfuno zenkonzo yokutya, zikhululeke ukubuza. Ndiya kukuvuyela ukukunceda.